Sakaraha: Fahasamihafan'ny versiona - Wikipedia
Sakaraha: Fahasamihafan'ny versiona
Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Mey 2022 à 08:59
2 005 octets ajoutés , il y a 1 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Mey 2022 à 08:30 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Mey 2022 à 08:59 (hanova) (esory)
I '''Sakaraha''' dia kaominina malagasy ao amin' ny [[distrikan'i Sakaraha]], [[Faritra Atsimo-Andrefana]], [[Faritanin'i Toliary]]. Ny isa-mponiny dia 21 011 araka ny faminavinana natao tamin' ny taona 2000 fa 31 183 kosa izany tamin' ny taona 2018. Ny kaodin-kaominina dia 51201 ary ny kaodin-distrika dia 512.
Andalovan' ny lalam-pirenena laharana faha-7 mampitohy an' i [[Toliara]] sy [[Antananarivo]] izy, 134 km miala an’ i Toliara, 64 km miala an' [[Andranovory]] ary 84 km miala an’ [[Ilakaka]]. Maherin’ ny 50 %n' ny mponina no tantsaha ary efa ho 30 % no mpiompy.
== Toekarena ==
=== Fitrandrahana harena an-kibon' ny tany ===
Nitombo ny toekaren’ i Sakaraha tamin’ ny fitrandrahana [[safira]]. Ny tahirin-tsafiran' i Sakahara dia iray amin' ireo lehibe indrindra eran-tany. Na ilay Saodiana atao hoe Mohamed Jamal Khalifah, vadin'ny anabavin' i Osama bin Laden, dia nanana toeram-pitrandrahana vato sarobidy tsy lavitra an' i Sakaraha. Nankany izy mba hitsidika azy ireo ary novonoin' ny jiolahy miisa 30 eo ho eo tao tamin' ny 31 Janoary 2007.
Ny orinasa ''Madagascar Southern Petroleum Company'' (MSPC) dia nahita [[entona voajanahary]] tany akaikin' i Sakaraha tamin' ny taona 2011.
=== Fitaterana ===
Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona.
Ny saran-dalan' ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin' ny andro fahavaratra dia 15 000 Fmg (na 3 000 Ariary).
Ny saran-dalan' ny olona tokana mankany amin' ny tanàn-dehibem-paritany amin' ny haintany dia 15 000 Fmg (na 3 000 Ariary).
=== Sampandraharaham-panjakana ===
=== Fizahan-tany sy tontolo iainana ===
Eo amin’ ny [[Fizahàn-tany|fizahàntany]] sy ny [[tontolo iainana]] dia azo atao ny mitsidika ny [[Valan-javaboarim-pirenena Zombitse-Vohibasia]] noho ny fisian' ny ''Madagascar National Parks'' (MNP) izay nantsoina taloha hoe ''Association Nationale de la Management of the Protected Areas'' (ANGAP). Any amin’ ny 20 km avaratra-atsinanan’ ny tanànan’ i Sakaraha no misy ilay valan-javaboary, 150 km miala ny tanànan’ i Toliara, 90 km any andrefan’ ny [[Valan-javaboarim-pirenena Isalo]]. Izy io dia noforonina tamin' ny taona 1997 ary manana velarantany 360 km<sup>2</sup> eo ho eo. Misy karazana gidro maromaro ary saika ny antsasaky ny karazam-borona rehetra eto Madagasikara no hita any. Ala maina no manjaka ao.
== Ny fotodrafitrasa sy ny sôsialy ==
=== Tsy fandriam-pahalemana ===
Ny isan' ny vono olona tanatin' ny taona 1999-2001 dia 19.
Ao amin' ny atao hoe faritra mena ilay kaominina. Ny isan' ny vakitrano tanatin' ny taona 1999-2001 dia 5. 2 no isan' ireo mpamono olona tratra tanatin' ny taona 1999-2001.
* Kaominina ao amin' ny [[Distrikan'i Sakaraha|Distrikan' i Sakaraha]]: [[Sakaraha]], [[Ambinany]], [[Amboronabo]], [[Andamasiny Vineta]], [[Andranolava]], [[Bereketa]], [[Mahaboboka]], [[Miary Lamatihy]], [[Miary Taheza]], [[Mihavatsy]], [[Mitsinjo]] et [[Mikoboka]].
* Distrika ao amin' ny [[Faritra Atsimo-Andrefana]]: [[Distrikan' Ampanihy]],[[Distrikan' Ankazoabo]], [[Distrikan' i Benenitra]], [[Distrikan' i Betioky-Atsimo]], [[Distrikan' i Beroroha]], [[Distrikan' i Morombe]], [[Distrikan' i Sakaraha]], [[Distrikan' i Toliara I]], [[Distrikan' i Toliara II]]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/1044912"